” မိမိထက် အသက် (၉) နှစ်လောက် ကြီးတဲ့လူကို ယူထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု “ -
ချစ် ပ ရိတ် သတ် ကြီး ရေ… အ နု ပ ညာ လော က ထဲ မှာ ငယ် ငယ် ရွယ် ရွယ် သွက် သွက် လက် လက် လေး နဲ့အောင် မြင် မှု မှတ် တိုင် တွေ ကို စိုက် ထူ ထား နိုင် ခဲ့ တဲ့ မင်း သ မီး ချော လေး ပိုင် ဖြိုး သု ကို ပ ရိတ် သတ် ကြီး သိကြ မှာ ပါ နော်။
သူ မ ဟာ အ ကယ် ဒ မီ ဆု ကြီး နဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ရဲ့ ပ ထ မ ဆုံး Star Award ဆု ကြီး ကို လည်း ထိုက် ထိုက် တန်တန် ရ ရှိ ပိုင် ဆိုင် ထား သူ တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး တော့ အ နု ပ ညာ ပါ ရ မီ ရှိ သူ လေး တစ် ယောက် လည်း ဖြစ် ပါတယ် နော်။
သူမဟာ လက်ရှိမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်းများစွာကိုဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီးတော့ ခီဇနီးမောင်နှံတို့နဲ့တောင်ဒီနှစ်ထဲမှာ Now & Everရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုဖန်တီးနေခဲ့ပါသေးတယ်နော်။
အခုဆိုရင်သူမဟာ မင်းသမီးတစ်ဆယာက်တင် မကဘဲ အိမ်ထောင်ရှင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး သူမကိုအရမ်းချစ် အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ ချစ်ခင်ပွန်း ကိုကိုဏကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူလေးပါနော်။
ဒါရိုက်တာဏကြီးဟာ သုသုထက် အသက်(၉)နှစ်လောက်ကြီးတာကိုပရိတ်သတ်ကြီးသိမှာပါနော်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း သုသုက ” မိမိထက်(၉)နှစ်တိတိကြီးသူကိုယူထားခြင်း၏အားသာချက်မှာ….. ဆံပင်မဆိုးထားချိန်တွင် အသက်၁၉နှစ်ကြီးသူ ‘ဦး’ နှင့်တွဲလာသည်ဟုလူအများကထင်ကြ၍…
ဆံပင်ဆိုးပြီးခါစအချိန်တွင် အသက်မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်သည့်’မောင်’ နဲ့တွဲလာသည်ဟုအထင်ခံရပြီး…. ဆံပင်ဖြူတွေပြန်ထွက်စအချိန်တွင်တော့ အသက်၉နှစ်ကြီးသူ ‘ကိုကို’ နှင့်တွဲလာသည်ဟုအထင်ခံရပါလိမ့်မည်….ပုံ… မိမိကိုယ်မိမိever19ဟုမှတ်ယူထားသူဒေါ်သု” ဆိုပြီးတော့ အရွှန်းဖောက်ကာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို နောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်နော်။
ကဲ… ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ဒီလိုအရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သုသုတို့စုံတွဲလေး အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပြီး နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ အချစ်တွေပိုနေကြပါစေလို့ဆုတောင်ပေးလိုက်ပြါအုန်းနော်။
Source : Paing Phyo Thu
” မိမိထကျ အသကျ (၉) နှဈလောကျ ကွီးတဲ့လူကို ယူထားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ရရှိလာတဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု “
ခဈြ ပ ရိတျ သတျ ကွီး ရေ… အ နု ပ ညာ လော က ထဲ မှာ ငယျ ငယျ ရှယျ ရှယျ သှကျ သှကျ လကျ လကျ လေး နဲ့အောငျ မွငျ မှု မှတျ တိုငျ တှေ ကို စိုကျ ထူ ထား နိုငျ ခဲ့ တဲ့ မငျး သ မီး ခြော လေး ပိုငျ ဖွိုး သု ကို ပ ရိတျ သတျ ကွီး သိကွ မှာ ပါ နျော။
သူ မ ဟာ အ ကယျ ဒ မီ ဆု ကွီး နဲ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ရဲ့ ပ ထ မ ဆုံး Star Award ဆု ကွီး ကို လညျး ထိုကျ ထိုကျ တနျတနျ ရ ရှိ ပိုငျ ဆိုငျ ထား သူ တဈ ယောကျ ဖွဈ ပွီး တော့ အ နု ပ ညာ ပါ ရ မီ ရှိ သူ လေး တဈ ယောကျ လညျး ဖွဈ ပါတယျ နျော။
သူမဟာ လကျရှိမှာရုပျရှငျဇာတျကားကွီးပေါငျးမြားစှာကိုဆကျတိုကျရိုကျကူးနရေတဲ့အထိအောငျမွငျမှုတှရေရှိနပွေီးတော့ ခီဇနီးမောငျနှံတို့နဲ့တောငျဒီနှဈထဲမှာ Now & Everရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကိုဖနျတီးနခေဲ့ပါသေးတယျနျော။
အခုဆိုရငျသူမဟာ မငျးသမီးတဈဆယာကျတငျ မကဘဲ အိမျထောငျရှငျမလေးတဈယောကျဖွဈနခေဲ့ပွီး သူမကိုအရမျးခဈြ အရမျးဂရုစိုကျတဲ့ ခဈြခငျပှနျး ကိုကိုဏကွီးကိုပိုငျဆိုငျထားရတဲ့သူလေးပါနျော။
ဒါရိုကျတာဏကွီးဟာ သုသုထကျ အသကျ(၉)နှဈလောကျကွီးတာကိုပရိတျသတျကွီးသိမှာပါနျော။
ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသတျပွီးလညျး သုသုက ” မိမိထကျ(၉)နှဈတိတိကွီးသူကိုယူထားခွငျး၏အားသာခကျြမှာ….. ဆံပငျမဆိုးထားခြိနျတှငျ အသကျ၁၉နှဈကွီးသူ ‘ဦး’ နှငျ့တှဲလာသညျဟုလူအမြားကထငျကွ၍…
ဆံပငျဆိုးပွီးခါစအခြိနျတှငျ အသကျမတိမျးမယိမျးဖွဈသညျ့’မောငျ’ နဲ့တှဲလာသညျဟုအထငျခံရပွီး…. ဆံပငျဖွူတှပွေနျထှကျစအခြိနျတှငျတော့ အသကျ၉နှဈကွီးသူ ‘ကိုကို’ နှငျ့တှဲလာသညျဟုအထငျခံရပါလိမျ့မညျ….ပုံ… မိမိကိုယျမိမိever19ဟုမှတျယူထားသူဒျေါသု” ဆိုပွီးတော့ အရှနျးဖောကျကာ သူမရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကို နောငျပွောငျခဲ့ပါတယျနျော။
ကဲ… ခဈြပရိတျသတျကွီးလညျး ဒီလိုအရမျးကိုခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ သုသုတို့စုံတှဲလေး အိုအောငျမငျးအောငျပေါငျးပွီး နောကျဆုံးထှကျသကျထိ အခဈြတှပေိုနကွေပါစလေို့ဆုတောငျပေးလိုကျပွါအုနျးနျော။